Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Mpandray anjara amin'ny sidina bikini tanora mahafatifaty mandray anjara amin'ny Fiara Balloon
Fantatra amin'ny fitsidihany sy fampisehoana erak'izao tontolo izao, balon-tsidina mafana-sy-tanora-mpanotrona an'i Vietjet izay manasongadina balaonina rivotra mafana izao mitondra ny zazavavy bikini ho any amin'ny Albuquerque International Balloon Fiesta 2017 any Etazonia, ilay festival lehibe indrindra eran-tany .
Ny balonan'ny Vietjet, izay 25 metatra ny haavony ary 18 metatra ny sakany, dia afaka manarona halavirana lavidavitra iray ary hahatratra ny haavon'ny maximum efa ho 1,000 metatra. Aseho izany ireo mpitsidika manomboka ny 7 ka hatramin'ny 9 Oktobra 2017.
Indrindra indrindra, ireo modely misy bikini malaza an'i Vietjet dia tonga tany Etazonia ihany koa mba hampakatra ny hafanana amin'ny festival tamin'ny fotoana voalohany. Ny mpitsidika ny festival dia hanana fotoana hijerena ny balaonina Vietjet izay maneho ny fahitana an-danitra an'i Albuquerque eo am-pihaonana amin'ireo modely mitafy bikini mitaingina an'habakabaka.
Nalefa tamin'ny 2016, nandray anjara tamina andianà fety lehibe tany Vietnam sy eran'izao tontolo izao ny balloon Vietjet. Tamin'ny Fetiben'ny Hue 2016, ny balloon Vietjet no hany solontenan'i Vietnam nandray anjara tamin'ny Fetibe Iraisam-pirenena Hot Air Balloon 2016 niaraka tamin'ny balaonina avy amin'ny firenena valo hafa, anisan'izany i UK, Netherlands, India, Japan, Korea, Thailand, Malaysia ary Filipina.
Tamin'ny volana Aogositra tamin'io taona io ihany dia niseho voalohany tany ampitan-dranomasina ilay balaonina tamin'ny fetiben'ny balaonina rivotra mafana lehibe indrindra any Taiwan, Luye Gaotai, ao amin'ny tanànan'i Taitung. Ny lozisialy Vietnamjet dia mbola izy irery ihany no solontena avy any Vietnam nandray anjara tamin'ny "My Balloon Fiesta" fahasivy any Kuala Lumpur, Malaysia misy mpandray anjara 18 avy amin'ny firenena 11 samihafa tamin'ny volana martsa 2017. Aorian'i Etazonia, ny balloon Vietjet dia handeha hamonjy ny toerana manaraka tany Japon tamin'ny Novambra 2017.
Natao voalohany tamin'ny 1972, ny Albuquerque International Balloon Fiesta dia fetiben'ny balon-drivotra mafana isan-taona izay atao isaky ny volana oktobra any Albuquerque, New Mexico, Etazonia. Ny 46th fiesta dia nahasarika balaonina 550 mahery sy mpanamory fiaramanidina efa ho 1,000 94 manerantany. Ny hetsika tamin'ity taona ity dia misy ihany koa ny volavola balloon tsy manam-paharoa 22 avy amin'ny firenena XNUMX ao Etazonia, Etazonia, Grande-Bretagne, Netherlands, Belzika, Brezila, Repoblika Tseky, Japon, sns. mahafinaritra sy fikarohana.